… अनि काेराेना र टेकु अस्पतालका स्तम्भ बने डा. सागर राजभण्डारी – Health Post Nepal
२०७७ माघ २४ गते १२:२७
अन्य देशमा कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेको थियो। सरकारले विदेशमा रहेका नागरिकलाई नेपाल ल्याउन थाल्यो। नेपाल ल्याउँदा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ज्वरो आएका बिरामीलाई सिधै टेकु अस्पताल लगिने गरिय्थाे। र, अन्यलाई क्वारेन्टिनमा राखिने गरीएकाे थियाे।
टेकु नेपालको एकमात्र सरुवा रोग अस्पताल हो। तत्कालीन समयमा अन्य ठाउँमा नमुना परीक्षण गर्ने सुविधा नै थिएन। त्यसबेला टेकुले नमुना लिएर परीक्षणका लागि प्रयोशालामा पठाउँथ्यो।
तर, डा. राजभण्डारीहार खाएनन्।
अस्पतालको भौतिक अवस्था नाजुक भएकाले आफूहरूले त्यही संरचनामा व्यवस्थित गरेको बताए।
उनले अस्पतालको कार्यभार सम्हालेपछि आफ्नो पहिलो निर्णय अस्पतललाई कोभिड डेटिकेटेड अस्पताल गरे।
यो जिम्मेवारी शुक्रराज ट्रपिकल अस्पतालले लिनुपर्छ भन्ने हिसावले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छलफल भयाे।
‘कोभिड–१९ का केसहरू राख्नको लागि सबैभन्दा पहिला पूर्वाधारको आवश्यकता पर्छ। त्यसैगरी जनशक्तिदेखि अक्सिजन तथा बजेटको व्यवस्था मन्त्रालयले गर्‍यो कोरोना संक्रमित पहिचान भएसँगै सुरूको दुई महिना हामीसँग ल्याब नभएकोले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा स्वाब संकलन गरेर पठाउने गरेका थियौं’, डा. राजभण्डारीले भने।
अस्पतालमा विस्तारै नमुना संकलनको संख्या बढ्दै गएपछि उपचारकाे साथ–साथै नमुना परिक्षाण गर्ने जिम्मेवारी पनि थपियाे।
‘हामीसँग पिसिआर मेसिन थियो।त्यो मेसिन एचआइभी संक्रमितको लागि भाइरललोडको परीक्षणका लागि प्रयोग गरिन्थ्यो’, उनले भने, ‘थप औजार–उपकरण थपेर हामीले त्यही मेसिनलाई प्रयोग गर्‍याैं।’
२०७७ जेठ २ बाट आफैँले नमुना परीक्षण गर्न थाल्याे। त्यसबेला आफूहरूको क्षमता हरेक दिन २ सय ८८ नमुना परीक्षण गर्ने गरेकाे थियाे।
तर, त्यती नुमना परीक्षण प्रर्याप्त भएन।
‘बीचमा हामीले क्षमता पनि बढाउनुपर्ने अवस्था आयो’, उनले भने, ‘निःशुल्क पिसिआर परीक्षणको लागि मानिसहरू भोकै यसै अस्पतालको परिसरमा सुत्न थाले, पानी पनि नखाई भोकै लाइनमा बसेका मानिसहरूका अनुहारले हामीलाई कर्तव्य बोध बढाइरहेको थियो।’
त्यसपछि हामीले दैनिक ४ सयभन्दा बढी नमुना परीक्षण गर्न थालियाे।
अन्य अस्पतालले कोरोनाको नाममा कुनै पनि बिरामीलाई भर्ना नलिइरहेको अवस्थामा टेकुले संकास्पद बिरामी आउनासाथ भर्ना लिनेगरेको उनी बताउँछन्। बिस्तारै
‘अन्य अस्पतालले पनि बिरामी लिन थालेको र आफूहरूलाई सहज भएको हुँदै गएकाे थियाे। हामीले मात्र सेवा दिएर दिनसक्ने अवस्था पनि त थिएन’, उनी भन्छन्।
अन्य अस्पतालका जनशक्तिलाई तालिम दिने, काउन्सिलिङ गर्ने काम पनि टेकु अस्पतालले नै गरेको थियाे। त्यसका साथ–साथै बिस्तारै अस्पतालमा आइसियुको पूर्वाधार थप्ने काम पनि गर्‍यो।
उनलाई त्यो कुराको व्यवस्थापन गर्नु पनि ठूलो चुनौति थियो।
मन्त्रालयले सबै स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल बढाउन कामको आधारमा जोखिम भत्ताकोसमेत व्यवस्थापन गरेकोमा उनले खुसी व्यक्त गछन।
उनी आफू चिकित्सक मात्र नभएर चिकित्सकीय व्यवस्थापनको भूमिकामा रहेकाले अप्ठ्यारोमा लड्न सिक्नु नै आफ्नो पहिलो दायित्व भएको बताउँछन्। आफूले एक वर्षको अवधिमा तीनपटक पिसिआर परीक्षण गरेको थिए।
यो खोप लगाउँदा आफूलाई फाइदा नै हुने र सबैलाई ढुक्क भएर लगाउँदा हुन्छ भन्ने सन्देश दिन नेपालमा पहिलो डोज लिएको उनको भनाइ छ। कुनै पनि खोप लगाउँदा
साधारण असर देखापर्ने भएकाले नआत्तिन उनी सुझाव दिन्छन्।